Puerto Rico ichave yakavhurika vafambi muna Chikunguru 15
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Puerto Rico Kuputsa Nhau » Puerto Rico ichave yakavhurika vafambi muna Chikunguru 15
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Puerto Rico Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Gavhuna wePuerto Rico Wanda Vázquez Garced
Sezvo zvakaziviswa nguva pfupi yadarika naGavhuna wePuerto Rico Wanda Vázquez Garced, vhiki ino inoratidza kutanga kwe3rd chikamu chekuvhurwa kwezvehupfumi kwehutongi hweUS, nekutandara uye kushanya kuri pamberi payo. Chiziviso ichi chinoratidza kuti vagari veko vanokokwa kuzonakidzwa nezviwanikwa zvakawandisa zveChitsuwa nemagariro zvinoshanda nekukasira, nepo indasitiri ichigadzirira kugamuchira vafambi zvakare kubva muna Chikunguru 15th neyakaomeswa seti yehutano uye chengetedzo zviyero munzvimbo yekudzora kupararira kwe Covid-19.
Parizvino, nzvimbo dzinoyevedzwa dzekushanya uye nzvimbo dzevashanyi dzakavhurika kune vagari veChitsuwa. Izvi zvinogona kunakidzwa nerunako rwekuzvarwa uye kugamuchira vaenzi indasitiri yekufamba nezvimwe zvinorambidzwa. Hotera dzakakomberedza Puerto Rico dzakaramba dzakavhurika mukati mese, uye nekuvandudzwa kwazvino, nzvimbo dzakajairika uye dzekutengesa, senge madziva, mabhawa, maresitorendi uye zvitoro mukati memahotera anokwanisa kushanda pa50% yekugona kuitira kusimudzira kusagadzikana munharaunda. Zvinokwezva vashanyi nenzvimbo dzakakurumbira zvakavhurwa panguva ino. Vashandi vekushanya uye mabhizinesi anorenda zvishandiso zvinoshandiswa zviitiko zvine chekuita nezviitiko zvekushanya vanobvumidzwa kutangazve mashandiro avo.
Rwendo rwekushanya kwekushanyirwa rwakatanga mazuva makumi mapfumbamwe apfuura, apo pakati paKurume, Gavhuna Executive Order yakamanikidza kukandwa kwakaperera kwechitsuwa. Puerto Rico ndiyo yaive yekutanga kutonga muUnited States kuita nguva yekudzora manejimendi eCOVID-90 uye kudzivirira kuparara kwehurongwa hwehutano hweChitsuwa. Kuedza kweHurumende yePuerto Rico kwave kuchizivikanwa zvakanyanya seimwe yemhinduro dzine hukasha muUnited States uye iyo COVID-19 mitengo yehutachiona nekufa paChitsuwa yakaramba iri pakati pevakaderera munyika.
Chitsuwa ichi chine tarisiro yekuenderera mberi nekuchengetedza hutano uye kuchengetedzeka kwevagari vese nevashanyi. Iyo Puerto Rico Tourism Kambani (PRTC), yeHurumende yeHurumende Ministry, yakagadzira nekuisa zviyero zvakaomarara izvo mabhizinesi ese ekushanya anofanirwa kutevedzera vasati vatangazve mashandiro avo. Neiyo Tourism Hutano uye Chengetedzo Chirongwa chakaburitswa muna Chivabvu 5th, Puerto Rico yakava imwe yenzvimbo dzekutanga dzekufambisa kuburitsa nhungamiro yakanyatsogadzirirwa kuchengetedza hutano hwepamusoro nekuchengetedzeka pamabhizinesi ese ekushanya.
“Tinoreva kana tichiti tinoda kunangana negoridhe muhutano nekuchengeteka. Mabhizinesi ese ane chekuita nekushanya anofanirwa kutevedzera nekushandisa nhungamiro dzakabatanidzwa muchirongwa ichi chakazara Iyo PRTC ichaongorora zvakare nekuzivisa pamusoro pe350 mahotera nevashandisi mukati memwedzi mina inotevera inofanirwa kutevedzera izvi zviyero. Tine chokwadi chekuti kuvimbiswa nekuchengetedzwa nematanho aya, pamwe nezvakaitika zvinoita kuti Puerto Rico ive nzvimbo inokwezva, ichaita basa rakakosha mukudzosa kwenguva pfupi indasitiri yekushanya yeSichi Island, "akadaro director director we iyo PRTC, Carla Campos.
Chiitiko chakachengeteka chinotanga panguva yekuuya. Luis Muñoz Marín International Airport (SJU / LMM), nhandare huru yechitsuwa ichi, ichishanda pamwe nePuerto Rico National Guard, irikushandisa tekinoroji yepamberi kuti igadzire tembiricha iri kuuya yevafambi uye iine vashandi panzvimbo kuti vaongorore hutano nekukurumidza. kune vafambi vanosvika kuChitsuwa. Yemahara uye yekuzvidira COVID-19 kuyedza inowanikwawo pane saiti. Iyo nhandare yakaramba yakavhurika uye, kusiyana nedzimwe nzvimbo dzeCaribbean, Puerto Rico haina kuvhara miganhu yayo. Parizvino, Puerto Rico inotarisira angangoita mazana maviri mashandiro ezuva nezuva ayo anosanganisira nhumbi, vafambi uye nendege dzendege.
Hurumende yePuerto Rico iri kushandawo kunze kwekumanikidzwa kwemazuva gumi nemana kusarudzika kuri kushanda, kune vafambi vanosvika kana mushure maJuly 14 izvo zvinopa humbowo hweyakaipa COVID-15 bvunzo. Zvimwezve zvinoitika sezvo zvine chekuita nezvinodiwa izvi zvichapihwa mumazuva anotevera sePuerto Rico inogadzirira kushanda kuti igamuchire vafambi.
Kuziviswa kwekutangazve kuri kuuya kwemabasa ekushanya kunotendera Discover Puerto Rico (DPR), iyo Island yekushambadzira musangano (DMO), kuti ivandudze yavo yekushambadzira. Mukuru weDPR, Brad Dean, akataura kuti "kutsvagurudza kunoratidza vafambi vari kutoronga zororo ravo rinotevera uye vari kutsvaga mabheji nenzvimbo dzekumaruwa dzinogona kuvimbisa chiitiko chakachengeteka uye chine hutano. Puerto Rico ndiyo sarudzo chaiyo sezvo ichibatanidza zviitiko zvekunze pamwe nekunyaradzwa uye kuwanika kwenzvimbo yekuUS isina pasipoti inodikanwa. Discover Puerto Rico akashanda kuti Puerto Rico irambe iri pamusoro pevatengi, uye kutanga musi waChikunguru 15, tichazokwanisa kuvapa zororo ravanga vachirota. ”
Mutungamiri wePRTC, Carla Campos, akati anotarisira matanho matsva uye anochinjika ayo achapa vashanyi mukana wekuwedzera uye mikana yekunakidzwa nerunako rwese rwezvisikwa, zvinokwezva uye zvinowanika pachitsuwa izvi zvichaziviswa pamberi kana muna Chikunguru 1st.
Mumashoko avo ekuvhara, Gavhuna Vázquez Garced vakakurudzira vafambi kuronga zororo ravo rinouya pamberi uye kutevedzera matanho ese akachengetedzwa kuchengetedza hutano nekuchengeteka kwevanhu vese mune nyowani nyowani yepasi rose nekuda kwe COVID-19 denda.